Ambongadiny XGEAR Pop Up Canopy Lay 10′x10′, mora napetraka sy fitehirizana, anisan'izany ny kodiarana mitondra kitapo fanamboarana sy ny orinasa |XGEAR
XGEAR Pop Up Canopy Lay 10′x10′, mora apetraka sy fitahirizana, ao anatin'izany ny kitapo mitondra kodiarana
XGEAR Pop Up Canopy lay 10' x 10' dia vita amin'ny vy sy vy.Ny frame dia tsy mahatohitra harafesina ary mifono vovoka, izay mahatonga ny tafo pop-up haharitra, matanjaka ary azo antoka.
Ampiasao izany na aiza na aiza tianao.Manomboka amin'ny piknik, fety, fitsangatsanganana lasy, hetsika zaridaina, mankany amin'ny tsenan'ny tantsaha, orinasa madinika sy ny sisa, ity tafo ity dia hiasa tsara ary hanome toerana malalaka ho an'ny fianakavianao sy ny namanao.
● Tafo 10x10 instantaneous dia manome alokaloka 100 metatra toradroa ho an'ny olona 15, lehibe kokoa noho ny ankamaroan'ny tafo ivelany.Faritra alokaloka lehibe ho an'ny tsenan'ny parasy, fety, tora-pasika, fandraharahana, hetsika fiaraha-monina ary ny fampiasana ivelany.
● Miaraka amin'ny frame One-Piece efa tafangona tanteraka amin'ny metaly matanjaka mirefy avo, ny kanopia XGear dia napetraka ao anatin'ny segondra tsy misy fitaovana ilaina.Raiso ny rafitra tafangona tanteraka miaraka amin'ny tampony avy ao anaty kitapo, sokafy, hanitatra ny tongotra ary vita ianao.
● Manome fiarovana tsara amin'ny masoandro, rivotra, orana ary toe-javatra hafa amin'ny toetr'andro.Fanamboarana kalitaon'ny vy vita amin'ny vovoka vita amin'ny vovoka sy ny fonon'ny lamba mateza: Ny tampon'ny tafo dia vita amin'ny lamba vita amin'ny volafotsy, manakana ny 99% amin'ny taratra UVA sy UVB manimba amin'ny tara-masoandro, mahatohitra ny rano ary maharitra maharitra.Ny tampon'ny andohalambo manohitra ny fanangonana rano;miaraka amin'ny fijoroana amin'ny toetr'andro mafana miaraka amin'ny fiarovana amin'ny tsipika fatorana 4 sy tsatoka vy 8 (aza avela amin'ny toetr'andro ratsy).
● Misy tampony 1 x, tady 4x, kitapo tsatoka 1 misy tsatoka 8, kitapo ary kitapo misy kodiarana.
Fitaovana fototra UV polyester coating volafotsy
loko Maitso maitso/ Maitso/ Beige/ Volafotsy/Manga
Item refy L120 x W120 x H111 santimetatra
Lanja entana 19.25KG
Haben'ny baoritra L50x W11 x H9 inches (1pc/box)
CartonGross Weight 20KG
● UV coating volafotsy amin'ny lamba lamosina manome UPF 50+ fiarovana, ary ny rafitra dia miorina tsara.
● Izy io dia azo entina ary mora entina amin'ny alàlan'ny famenoana azy ireo ao anatin'ny kitapom-baolina mavesa-danja izay misy kodiaran-kodiarana & hoditra.
● Ny famolavolana tongotra mahitsy dia afaka manome toerana bebe kokoa.
Mora ny mametraka sy mitahiry izany, ary mety amin'ny fampiasana ivelany:
Izany diaperfect ho an'ny fanatanjahan-tena ivelany, hetsika, fetibe, tsena parasy, fety, tora-pasika, kianja filalaovana.
Ary tsara ho an'ny zaridainanao, tokotaninao, patio,ho an'ny dia RV sy piknik.
Manoro hevitra ny hanampy anayRindrin-drindrina misy zipper mesh mba tsy hanelingelina ny moka, ary mahazo toerana aina kokoa.
teo aloha: Fampiofanana haingam-pandeha haingana miaraka amin'ny Tohatra TPE ho an'ny fampiofanana ara-batana sy baolina kitra
Manaraka: XGEAR Seza ambany seza maivana miforitra tora-pasika miaraka amin'ny lamosina lamosina avo